Ra’iisul Wasaare Khayre“Gabdhaheenu miyeynan ogan lahayn in la guursado Hadii Aan Qalab loo iibin lahayn Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed “ - Awdinle Online
Ra’iisul Wasaare Khayre“Gabdhaheenu miyeynan ogan lahayn in la guursado Hadii Aan Qalab loo iibin lahayn Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed “
February 22, 2020 (Awdinle Online) –Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo maanta ka qaybgalayay Munaasabad lagu maamuusayay 50-sano guuradii kasoo wareegtay Aas-aaska Ciidamada Asluubta waxa uu ka hadlay dib u dhiska Ciidamada DFS iyo Caddaalad darrada.
Saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxa uu sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay dadaal Xooggan Gelisay dib u habeynta Dhaqaalaha, Ciidamada iyo nidaamka Dowladnimada oo dalka muhiim u ah.
Ra’iisul Wasaare Kheyre waxa uu shaaciyay in haddii la dhiso Ciidamada oo kaliya, isla markaana aan waxba laga qaban dhibaatooyinka dhanka Caddaaladda aan isku dheeli-tirmeyn waxqabadkooda.
“Si Shaqada Ciidamada ay u sahlanaato, waa in mas’uuliyad la iska saaraa Caddaaladda oo sal u ah howl waliba oo la qabanayo, waxaana Taliyaasha iyo Wasiirka Caddaaladda farayaa in ay mas’uuliyad iska saaraan” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Waa uu sii hadlay waxa uuna yiri “Ciidanka Asluubta ee halkaan ku sugan shaqada uma fududaaneyso haddii aysan Caddaalad helin ama wax ku qaban, Haddii Hay’adaha kale ee Dowladda dib u habeyn lagu sameeyo oo laga tago Caddaaladda, howsha ama nidaamka Dowladda ma isku dheeli-tirmayo”
Wasiirka koowaad ee Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxa uu tilmaamay in wax laga qabto Caqabadaha hortaagan Dowladnimada iyo Caddaaladda oo ay ugu weyn tahay qabyaaladda.
“Sida qofka uu ugu baahan yahay Hoy ama Cunto ayuu dadka u baahan yahay Caddaaladda, waxaana lagu gaari karaa in wax laga qabto Qabyaaladda, Qaraabo kiilka, Laaluushka, Marqaati beenaadka, Dulmiga bareerka ah iyo danta gaarka ah oo laga hormariyo tan guud” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre.
Madaxda DFS waxa ay dhowr jeer sheegeen in ay wax ka qabanayaan Caddaalad darrada oo ah dhibaatada ugu weyn ee dalka ka jirta, waxaana ay ballanqaadeen in ay wax ka qabanayaan, inkasta oo ay jiraan shaqsiyaad wali sheeganaya Caddaalad darro.
Previous articleAkhriso:-Taliska Booliska somaliyed oo Isbedal ku sameeyay Taliska Galmudug
Next articleDaawo:-Cabdiraxmaan Cirro “Muuse Biixi Somaliland waxa uu ka dhigay saylad uu isagu lee yahay”